Iphrofayili yenkampani - Foshan Chengpai Sanitary Ware Co., Ltd. '
Isungulwe ngo-2012, ibhizinisi ligxile ekukhiqizeni amakhanda eshawa aphakathi nendawo nangaphezulu, amakhanda eshawa e-LED, amasudi ekhanda leshawa, amasudi okugeza, amapaneli eshawa, ompompi, amakamelo okugeza, ihadiwe yokugezela, njll.
Inesistimu yesiqinisekiso ehlanganisa ucwaningo nentuthuko, ukukhiqiza, ukulawula ikhwalithi, nezinsizakalo zangemva kokuthengisa.
Imikhiqizo yayo ithunyelwa kakhulu eYurophu, e-US, eningizimu-mpumalanga ye-Asia, eMpumalanga Ephakathi, njll ngenkathi ibhizinisi selingumlingani we-OEM wemikhiqizo yenhlanzeko edume umhlaba wonke.
Ukugxila ekukhiqizeni imikhiqizo ephakathi naphezulu, ibhizinisi libeka ikhwalithi ngaphambi kobuningi futhi sekuyisikhathi eside linikelwe ekuthuthukiseni inani lomkhiqizo ongumnikazi walo ngenhloso yokuba yimboni engcono kakhulu yensimbi engenazinsimbi engenazinsimbi.
Ihlala izibophezele ekwakheni izindlu zangasese “Ezinhle, Eziphakeme, Ezinemvelo, Ezinempilo Nezivuselelekayo” futhi inikezelwe kulabo abafuna ukushawa kamnandi futhi bajabulela impilo yabo.Ngemikhiqizo yakwaChengpai, ungaba nemvula yesifutho esibhakabhakeni esimnyama ukuze unciphise ukukhathala kwakho kosuku nganoma iyiphi indlela oyithandayo. Vele uthokozele ishawa ethokomele futhi ethandekayo yaseChengpai futhi uphumule ngobumnandi!
I-Chengpai inamazinga aqinile kakhulu wokukhetha izinto zokusetshenziswa. Onke amapaneli ayo angenansimbi enziwe ngensimbi engagqwali engama-304 futhi aqukethe okuholayo, i-chromium, i-elekthronikhi enamathele, into enobuthi, nokungcola. Iphilile futhi ayinabuthi, imikhiqizo yayo yonga amandla futhi ihlangabezana nezindinganiso zokuvikelwa kwemvelo kwamazwe aseYurophu naseMelika.
Ngokususelwa kumgomo wokusebenza ngobuqotho nokubambisana kwe-win win, uChengpai ungene ezitolo ezinkulu zokuthenga zaseChina nakwamanye amazwe. Imikhiqizo yayo itholakala eHamburg, eMilan, eLondon, eFlorida, eCanada, eFrance, eBelgium, eMiddle East, nasemazweni aseNingizimu-mpumalanga ye-Asia.